အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များ လူ့ဂုဏ်သိက္ခာနှင့်အညီနေနိင်သည်အထိ ကြိုးပမ်းမည်ဟု သာသနာရေးရာကောင်စီ ကတိပြု - Islamic Religious Affairs Council
You are here: Home ဆောင်ရွက်ချက် အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များ လူ့ဂုဏ်သိက္ခာနှင့်အညီနေနိင်သည်အထိ ကြိုးပမ်းမည်ဟု သာသနာရေးရာကောင်စီ ကတိပြု
အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များ လူ့ဂုဏ်သိက္ခာနှင့်အညီနေနိင်သည်အထိ ကြိုးပမ်းမည်ဟု သာသနာရေးရာကောင်စီ ကတိပြု
ဒီဇင်ဘာ ၂၁၊ ၂၀၁၄
အစ္စလာမ်သာသနာရေးရာကောင်စီအား စတင်ထူထောင်ခဲ့သူများ၏ ရည်မှန်းချက်ဖြစ်သည့် အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များ လူ့ဂုဏ်သိက္ခာရှိစွာဖြင့် ဘ၀ရပ်တည်နိင်ရေး ရည်မှန်းချက်ကို ယနေ့အချိန်အထိအောင်မြင်အောင် မဆောင်ရွက်နိင်သေးကြောင်းနှင့် အဆိုပါရည်မှန်းချက်အောင်မြင်ရေး သံဓိဌာန်ချထားကြောင်း ဥက္ကဋ္ဌကြီး ဦးညွန့်မောင်သျှိန်က အစ္စလာမ်သာသနာ ရေးရာကောင်စီဌာနချုပ် နှစ် ၆၀ ပြည့်အခမ်းအနားတွင်ကတိပြုပြောကြားလုိုက်သည်။
“မိမိတုို့ဘုိုးဘေးများရဲ့ ဂုဏ်ရောင်ပြောင်မြောက်တဲ့ အတိတ်သမုိုင်းနဲ့အညီ ဂုဏ်သိက္ခာရှိစွာဖြင့် ဘ၀ရပ်တည်နိင်ရေးနဲ့ နှစ်ဘ၀ကောင်းစားရေးကို ရည်မှန်းချက် ပန်းတုိုင် ထားကာ အစ္စလာမ်သာသနာရေးရာကောင်စီကိုဖွဲ့စည်းထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီ့ရည်မှန်းချက်ပန်းတုိုင်သုို့ ယနေ့တုိုင်မတက်လှမ်းနိင်သေးသော်လည်း မဆုတ်မနစ် ဇွဲလုံးလဖြင့် ဆက်လက်လျှောက်လှမ်းကြမယ်လို့ ကျွန်တော်တုို့ ခုိုင်ခုိုင်မာမာ သန္နိဋ္ဌာန်ပြုပါတယ်”ဟု အစ္စလာမ်သာသနာရေးရာကောင်စီ ဥက္ကဋ္ဌကြီး ဦးညွန့်မောင်သျှိန်က အထက်ပါအခန်းအနားမိန့်ခွန်းတွင် ကတိပြုပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
“သန္နိဋ္ဌာန်ချထားတယ်။ မဖြစ်ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်လို့ သန္နိဋ္ဌာန် ချထားတယ်”ဟု ဥက္ကဋ္ဌကြီး ဦးညွန့်မောင်သျှိန် က Myanmar Muslim Media သို့လည်း ထပ်လောင်း ပြောကြားသည်။
သာသနာရေးရာကောင်စီ၏ မူလမျှော်မှန်းချက်ပန်းတုိုင်သို့ ရောက်ရန် အစိုးရအသီးသီးလက်ထက်တွင် ဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့် အပြည့်အ၀မရှိခြင်းလည်း ပါဝင်ကြောင်း အစ္စလာမ်သာသနာရေးရာကောင်စီဌာနချုပ် အတွင်းရေးမှူးချုပ်က သုံးသပ်သည်။
“ဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်လည်း ဒီ့ထက်ပိုပြီး ရှိဖို့လုိုမှာပေါ့။ ဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်က အခြေခံကျတယ်။ လုပ်ငန်းစဉ်အားလုံးအတွက်ကို ။ ဘာသာရေး လွတ်လပ်ခွင့် မရှိတဲ့အတွက် လွတ်လွတ်လပ်လပ်မဆောင်ရွက်နိင်ဘူး၊ လွတ်လွတ်လပ်လပ်မဆောင်ရွက်နိင်တဲ့အတွက်ကြောင့် ရည်ရွယ်ချက်လုပ်ငန်းစဉ်တွေနဲ့ ဘယ်လုိုဘဲ ချမှတ်ပြီး အကောင်းဆုံးပြဌာန်းပြဌာန်းပေါ့ လက်တွေ့မှာကျတော့ ဖြစ်သင့်သလောက်ဖြစ်မလာဘူးပေါ့” ဟု အတွင်းရေးမှူးချုပ် ဦးတင်မောင်သန်းက Myanmar Muslim Media သို့ပြောသည်။
လွတ်လပ်စွာကိုးကွယ်ခွင့်ရှိကြောင်း အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများက မကြာခဏ ပြောကြားချက်များရှိနေသည့် မြန်မာနိင်ငံသည် စနစ်တကျနှင့် တုန်လှုပ်ချောက်ခြားဖွယ်ရာ ဘာသာရေးအကြမ်းဖက်မှုအဖြစ်ပွားဆုံးအမည်ပျက် ၁၅နိင်ငံစာရင်းတွင် မြန်မာနိင်ငံပါဝင်ကြောင်း အမေရိကန်နိင်ငံမှ ထုတ်ပြန်ချက်တစ်ရပ်ကို ကိုးကားကာ ၂၀၁၃ခုနှစ် မေလ ၂ ရက်နေ့ပါ The Irrawaddy သတင်းတစ်ရပ်တွင် ဖေါ်ပြထားသည်။
“ဒီနိင်ငံမှာ နိင်ငံသားကောင်းတစ်ယောက်အနေနဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာရှိရှိနဲ့ ကိုယ့်ဘာသာသာသနာအပေါ် ကိုယ်ယုံကြည်တာကိုလဲ စိတ်အေးချမ်းသာစွာနဲ့ ကျင့်သုံးချင်တယ်။ အဲဒီ့ အခြေအနေကိုရောက်အောင်ကြိုးပမ်းတာ မအောင်မြင်သေးဘူးလို့ ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ရဲ့ ဥက္ကဋ္ဌရော အတွင်းရေးမှူးချုပ်ကရောပြောတာ” ဟု အစ္စလာမ်သာသနာ ရေးရာကောင်စီဌာနချုပ် တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူးချုပ် ဦးဝဏ္ဏရွှေက လည်းရှင်းပြသည်။
ဦးနုအစိုးရအဖွဲ့က ဗမာမွတ်စလင်မ်ကွန်ဂရက်အား ဘာသာရေးနှင့် နိင်ငံရေးရောထွေးသည်ဟူသော အကြောင်းပြချက်ဖြင့် ဖျက်သိမ်းစေခဲ့သောကြောင့် အစ္စလာမ် သာသနာရေးရာကောင်စီကို ၁၉၅၄ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၅ ရက်နေ့တွင် ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။
“ကောင်စီရဲ့ ရည်မှန်းချက်ပန်းတုိုင် ဘာလဲဆုိုတာကို အတုိုဆုံးနဲ့ အရှင်းဆုံး ပြောရရင်တော့ လူ့ဂုဏ်သိက္ခာနဲ့အညီ လူပီပီသသ နေနိင်ဖို့ပဲ။ အဲ့ဒီ့ လူ့ဂုဏ်သိက္ခာနဲ့အညီ နေနိင်သလား မနေနိင်သလားဆုိုတာ ကျွန်တော်တို့ ပြောစရာမလိုဘူး။ ခင်ဗျားတုို့အားလုံးသိတယ်”ဟုလည်း ဦးဝဏ္ဏရွှေက ပြောသည်။
အစ္စလာမ်သာသနာရေးရာကောင်စီသည် အစ္စလာမ့်အသိပညာပေး စာပေများ ထုတ်ဝေခြင်း၊ ခေတ်ပညာနှင့် အစ္စလာမ်သာသနာ့ပညာ တွဲဖက် သင်ယူနိင်ရေး ထောက်ကူပြုကျောင်းများ ဖွင့်လှစ်ခြင်း၊ နွေရာသီ အစ္စလာမ်အသိပညာပေး အန်ဆွာရီ သင်တန်းများဖွင့်လှစ်ခြင်း၊ ဟလာဟ်စားသောက်ကုန်စိစစ်အသိအမှတ်ပြု လက်မှတ် ထုတ်ပေးခြင်း စသည့်လုပ်ငန်းစဉ်များကို ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။
" We can't achieve our founders' goal that is to restore the dignity of Myanmar Muslims and we hereby vow to do our best for it , "said U Nyunt Maung Shein, the Chairman of the Islamic Religious Affairs Council, at its 60th Anniversary Event.
" The Council was founded by our honourable ancestors to serve the Muslims to possess success in life and hereafter. Though not being able to grasp this goal, we have strongly determined to carry on for it," he added to Myanmar Muslim Media.
The General Secretary U Tin Maung Than also pointed out that no government of Myanmar had accessed the freedom of faith to Muslims. " Without Freedom of Belief, we can do nothing enough for the sake of Muslims even though we've endeavoured our best," he said.
" we want to practice our religious teachings peacefully and we're trying for it," explained U Wunna Shwe, the Joint Secretary of Islamic Religious Affairs Council which was founded in December 5, 1954 after the Burma Muslim Congress had been liquidated by U Nu's government. " To be brief, our goal is to live in dignity that is not neededaquestion".
မူရင်းလင့် - https://www.facebook.com/MyanmarMuslimMedia/photos/a.540558852660582.10